Ururka Qareenada Somaliland oo Hay’adaha Sharciga dalka u qabtay kulan wada-tashi Caddaaladeed | Somaliland.Org
Ururka Qareenada Somaliland oo Hay’adaha Sharciga dalka u qabtay kulan wada-tashi Caddaaladeed
November 26, 2009	Hargeysa (Somaliland.Org)- Kulan lagaga hadlayay habka wada-shaqaynta qaybaha Cadaaladda dalka oo uu soo qaban-qaabiyay Ururka Qareenada Somaliland ee SOLLA, ayaa lagu qabtay Hutel Imperial ee Magaalada Hargeysa.
Kulankan oo ay isugu yimaaddeen Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Axmed Xasan Cali (Casoowe), Xeer-Ilaalinta guud, Maxkamadda Sare, Booliska, Asluubta, Hay’adda UNDP/Rols iyo Masuuliyiinta Ururka Qareenada Somaliland ee SOLLA, ayaa ujeedadiisu ahayd sidii loo xoojin lahaa wada-shaqaynta Hay’adahan kor ku xusan, gaar ahaan sidoo looga wada shaqayn lahaa Barnaamij la xidhiidha sidii dadka saboolka ahi ay u heli lahaayeen Qareen Lacag-la’aan ah, kaas oo hadda hirgelay. “Kulankan oo uu isugu kiin yeedhay Ururka Qareenada Somaliland ee SOLLA, ayaa loo baahan yahay sidii looga wada shaqayn lahaa. Sababtoo ah, Barnaamijkani wuxuu ka mid yahay Siyaasadda Wasaaradda Cadaaladdu ugu talo-gashay inay ku hagaajiso Cadaaladda. Waxaana taageerta Hay’adda UNDP/Rols. Barnaamijkan ayaa ah in dadka nugulka ah ee danyarta ah laga taageero Sharciyadda, kaas oo uu fulinayo Ururka SOLLA.” Sidaa waxa yidhi Garyaqaan Maxamed Siciid Xirsi oo ka mid ah Masuuliyiinta Ururka SOLLA. Waxaanu Maxamed sheegay in horeba uu u bilaabmay barnaamijkani. Hase ahaatee, ay la kulmeen caqabado kaga yimi dhinaca Booliska. “Hadda waxa gobolka Hargeysa ka hawl-gala hal Qareen iyo saddex Qareen-kaaliye oo lacag-la’aan ah. Gobolka Togdheerna laba Qareen iyo saddex Qareen-kaaliye. Sanaag hal Qareen iyo hal Qareen-kaaliye. Saaxil hal Qareen iyo hal Qareen-kaaliye. Halka gobolka Awdalna uu ka hawl-galo hal Qareen iyo hal Qareen-kaaliye.” Ayuu yidhi Maxamed Siciid, waxaanu intaa ku daray oo uu yidhi, “Qareenadayada Gobolka Awdal ayaa lagu yidhi ma soo geli kartaan Saldhigyada. Taasina waxay dhaawacaysaa caddaaladda.” Waxaanu Gar-yaqaanku sheegay in ay xil Xukuumadda saaran tahay in dadka danyarta ahi ay Qareen lacag-la’aan ah helaan.
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Axmed Xasan Cali (Casoowe) oo isna halkaa ka hadlay, ayaa ku dheeraaday waajibaadka eedaysanaha iyo ka uu ku leeyahay Ciidamada ilaalinaya Saldhigyada. Waxaanu sheegay in qabashada Qareen lacag-la’aan ahi ee danyartu uu yahay waajib saaran Xukuumadda, balse Miisaaniyadda loo qoondeeyay oo yar awgeed ay hore uga taageereen Ururka SOLLA, Jaamacadaha Hargeysa iyo Cammuud iyo sidoo kale UNDP/Rols. Waxaanu ka jawaabay caqabadda ay Qareenada SOLLA la sheegay inay kala kulmeen Saldhigyada Borama. “Qareenadu iyaga oo danta qaranka wada yaanay isu-arkin ururo Madax bannaan, waana inay sharciga ku socdaan. Sababtoo ah, waxa jideeyay oo iyaga banneeyay waa sharci.” Ayuu yidhi Wasiirku.
Wasiirku wuxuu ka-qayb-galayaashii Kulankan kula dardaarmay in dhinac waliba u gudbiyo oo uu gaadhsiiyo Hay’addii uu ka yimi Barnaamijkan iyio sida laysaga kaashanayo. “Cid kastaa ha gaadhsiiyaan dhinacooda oo ha u sheegaan in dano qaran la wada wado.” Ayuu yidhi Wasiirku.
Ku-simaha Xeer-Ilaaliyaha guud ee Qaranka Aadan Muuse oo isna halkaa ka hadlay, ayaa ballan-qaaday inay dhinacooda kala shaqaynayaan Qareenada iyo Ururkoodaba, waxaanu baaq u jeediyay Wasiirka, SOLLA iyo Hay’adda UNPD. “Wasiirka iyo UNDP waxaan u jeedinayaa in la tayeeyo Xafiiska Qareenada, si sharcigu isugu dheeli-tirmo. Ururka SOLLA-na waxaan ku boorinayaa in aanay eedaysanayaasha uun difaacin ee aanu doodo isugu niimaadno oo aad nala talisaan.” Ayuu yidhi Aadam.
Sidoo kale, waxa halkaa ka hadlay Garyaqaan Tahliil X. Axmed oo ka socday Hay’adda UNDP, waxaanu ku dheeraaday oo uu si qoto dheer uga hadlay sooyaalkii qaab-dhismeedka Hay’adaha Sharci ee dalka. Isla markaana wuxuu tilmaamay in sharcigu u baahan yahay iskaashi. Tahliil wuxuu sheegay in sidoo kale loo baahan yahay tababaro badan oo la xidhiidha sharciga. Waxaanu ballan-qaaday inay dhinacooda diyaar la yihiin wixii ku xidhan.
wararkasomaliland@gmail.com This entry was posted in News. Bookmark the permalink.	Comments are closed.